Dhamma Video - Browse Media - A - á€¡á€˜á€­á€“á€™á�¼á€¬
A - Abhidhamma - အဘိဓမ္မာ - Random
Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / A - Abhidhamma - အဘိဓမ္မာ ဓမ္မဗျူဟာ...
ကျေးဇူးတော်ရှင် ပြည်တွင်းပြည်ပ အဘိဓမ္မ ဂန္ထကာရက၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်လမ်း မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်
အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒန္တ...
Tags: ဓမ္မဗျုဟာဒေါ်ခင်လှတင် အဘိဓမ္မာ _ dhamma dawkhinhlatin dhammabyuuhar dawkhinhlatin abhidhammar abhidhamma abidhammar abidhamma dhamma Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဗုဒ္ဓအဘိဓမ...
ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ (၁၀) ရက်သင်တန်း ၊ အပိုင်း (၁၉) ၊ သမုစ္စည်း။
ရွှေတိဂုံစေတီတော် စည်ပင်ဓမ္မာရုံ။- ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်...
Tags: ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ (၁၀) ရက်သင်တန်း ၊ အပိုင်း (၁၉) ၊ သမုစ္စည်း။ - ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် buddha abhidhamma teaching dr min tin mon dr. mehm tin mon Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / P - Pahtan - ပဋ္ဌာန်း ပဋ္ဌာနပါဠိ...
Tags: ပဋ္ဌာနပါဠိ (ပဋ္ဌမတွဲ) ပဋ္ဌာန်း pahtan pathan patan pa htan pa than pa tan Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / A - Abhidhamma - အဘိဓမ္မာ ဓမ္မဗျူဟာ...
ဓမ္မဗျူဟာ သင်တန်းသားများ ၏ အမေးကိုဖြေဆိုခြင်း
Tags: ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ ဓမ္မဗျူဟာ _ parmoutkhachoat doctor ashin nandamalarbiwontha Dr-Nandamalabhivamsa professor dr.nandamalaviwuntha Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ / K - KyenSar - ကျမ်းစာများ ပဋ္ဌာနပါဠိ...
Tags: ပဋ္ဌာနပါဠိ (စတုတ္ထတွဲ) ပဋ္ဌာန်း pahtan pathan patan pa htan pa than pa tan Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဗုဒ္ဓအဘိဓမ...
ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ (၁၀) ရက်သင်တန်း ၊ အပိုင်း (၁၄) ၊ ဝီထိ ၊ ဘုံ
ရွှေတိဂုံစေတီတော် စည်ပင်ဓမ္မာရုံ။- ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်
Tags: ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ (၁၀) ရက်သင်တန်း ၊ အပိုင်း (၁၄) ၊ ဝီထိ ၊ ဘုံ - ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် buddha abhidhamma teaching dr min tin mon dr. mehm tin mon Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဗုဒ္ဓအဘိဓမ...
Added: 16th December 2012
ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ (၁၀) ရက်သင်တန်း ၊ အပိုင်း (၁၂) ၊ ဝီထိပိုင်း ၊
Tags: ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ (၁၀) ရက်သင်တန်း ၊ အပိုင်း (၁၂) ၊ ဝီထိပိုင်း - ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် buddha abhidhamma teaching dr min tin mon dr. mehm tin mon Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဗုဒ္ဓအဘိဓမ...
ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ (၁၀) ရက်သင်တန်း ၊ အပိုင်း (၁၅) ၊ ဘုံပိုင်း ။
Tags: ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ (၁၀) ရက်သင်တန်း ၊ အပိုင်း (၁၅) ၊၊ ဘုံပိုင်း - ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် buddha abhidhamma teaching dr min tin mon dr. mehm tin mon Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဗုဒ္ဓအဘိဓမ...
ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ (၁၀) ရက်သင်တန်း ၊ အပိုင်း (၄) ၊ စိတ်ပိုင်း။
Tags: ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ (၁၀) ရက်သင်တန်း ၊ အပိုင်း (၄) - ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် buddha abhidhamma teaching dr min tin mon dr. mehm tin mon Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဗုဒ္ဓအဘိဓမ...
ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ (၁၀) ရက်သင်တန်း ၊ အပိုင်း (၄) ၊ စေတသိက်ပိုင်း။
Tags: ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ (၁၀) ရက်သင်တန်း ၊ အပိုင်း (၅) - ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် buddha abhidhamma teaching dr min tin mon dr. mehm tin mon Pages: 123456of 6